Sofas rattan patio furniture, okomoko white wicker garden, wholesale Furniture on TopChinaSupplier.com
Mbido ulo ngwaahịa Sofaslọ Mpụga Okpokoro wicker na-acha ọcha na-acha ọcha sofas rattan patio furniture
Okpokoro wicker na-acha ọcha na-acha ọcha sofas rattan patio furniture
10 ubdị CubicMita Kpọtụrụ onye na-eweta
1. Aluminom fRama
2. Ihe atụ: PE Rattan na-achọghịgharị, nke na-adigide na UV na-eguzogide
3. Ihe nkwupute akwa mkpuchi mmiri
Odikwa na Mpaghara Ọrụ Nanlang, TANFLY Furniture Co., Ltd bụ onye nrụpụta kachasị elu na onye na-ebubata ya ihe nwere ihe karịrị 5 afọ ahụmahụ, Companylọ ọrụ a chịkọtara otu ìgwè talent ma na R&D, n'ichepụta na n'ahịa nke oche aka ekpe ngwaahịa.EGO raara onwe ya nye n'izu “Zuru oke Ihe Nleri AnyaNgwọta ”to condị na-emegharị ụwa.
Kwere na ụlọ ọrụ anyị, beacuse anyị ga-agbacha mbọ niile:
Ọkpụkpụ: Ahụmahụ 4 afọ, ihe karịrị ndị ọrụ 100 na ụlọ ọrụ 6,000square mita
Ogo: SGS agafere akwadoro.
Ike: 300 * 40HQ condị na-azụta ngwá ụlọ n'otu afọ.
Nzipu: Usoro OA zuru oke na-eme ka nnyefe jide n'aka ụbọchị 15-25.
Azụmaahịa: Mkpesa niile na-edozi n'ime ụbọchị 1-3.
R&D: 4 onye R&D otu na-elekwasị anya na rattan furnitures, ọ dịkarịa ala ugboro 3 kwa afọ ngwaahịa ọhụrụ na-etinye n'ahịa.
Otu ihe ndozi ngwongwo rattan: Otu nkwụ, rattan sofa, modulu sofa, ebe a na-eri nri, oche na tebụl, oche ndọkụrịta, ebe a na-edebe ihe, ụlọ ebe a na-asa mmiri, ngwaahịa mpụga mpụga, TANFLY na-enye ihe ndozi ngwá ụlọ rattan zuru oke.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ wicker n'èzí?
Wicker n'èzí agbanweela karịa ụdị ụlọ ọ bụla ọzọ dị larịị n'afọ iri gara aga.
Ihe niile etinye aka na usoro a ka emeziwanye iji nye anya kacha dị mma na ogo ịdị larịị. Mmiri mmiri ozuzo, snow, mmiri ozuzo ma ọ bụ nke na-enwu, resin wicker n'èzí nwere ike ijikwa ihe ọ bụla Mama Nature chọrọ ịtụfu ya.
na-enye nlezi anya nke arụmọrụ nke na-eguzogide nkewa na chipping. A na-ekpuchi akụkụ nke ọ bụla aluminom siri ike fmgbu nke na-enye nkwụsi ike zuru oke na ndụ ndụ.
1.100% ejiri aka mere ya site n'aka ndi omenkà nwere aka.
2. Ma adabara ime ụlọ & n'èzí.
3. Igwe ọkụ UV dị mma, oke ọkụ na-eguzogide ọgwụ, na-eguzogide ihu igwe, na-enweghị ụcha.
4. jiri akwa ikuku na-adọrọ mma maka nhọrọ.
5. Pee rattan & kwushin & Ohiri isi na agba dị ka amasị gị.
6. Ngwa ahia eji eme enyi nke ọma site na ọnụahịa kacha asọmpi.
7. Ngwaahịa niile na-enye nkwa dịkarịa ala afọ 2.
8. OEM ma ọ bụ ODM dị.
Akwụkwọ ikike adịghị: 24 moụrọ (gbakọọ site na ụbọchị nrụpụta site na TANFLY) maka ihe ndị ọzọ eji achọ ụlọ. N'ime oge a, anyị nwere ike dochie arịa ụlọ n'efu n'efu ma ọ bụrụ na enwere ezigbo nsogbu nke ngwaahịa a na-enweghị ike idozi ngwa ngwa. (Maka mbibi nke aka mmadụ mere ma ọ bụ nke a na-apụghị igbochi egbochi, ga-akwụ ụgwọ mmezi ya na ngwa ndị ahụ.
A ga-edozi mkpesa niile n'ime ụbọchị 1-3. Anyị kwenyere na njikwa mkpesa n'oge na ụzọ dị irè na-enyere ndị mmekọ anyị nkwado siri ike. Anyị professiootu nalsales siri ike nkwado maka ndị mmekọ anyị ruo mgbe ebighi ebi.
Pee rattan agba dị: ojii, agba aja aja, isi awọ, ọla ọcha, ụcha ọcha wdg bụ nhọrọ.
Cushion agba dị: aniseed, turquoise, rasberi, mastic, chocolate, emerald, anthracite, white, wdg.
Agba na agba nke agba nwere ike ịdị nhọrọ.
arịa ụlọ ubi
ngwo ngwo ngwa
heb patio ngwá ụlọ
oche dị n'èzí
Ogige udu mmiri
eji emezi ụlọ nkwari akụ